ဗီလိန်ဇာတ်ရုပ်တွေကြောင့် ပရိသတ်တွေ မုန်းမှာ ၊ အမြင်ကပ်မှာကို မကြောက်ဘူး ဆိုတဲ့ ပြေဇင် | Popular
August 24, 2019 Popular
ပြေဇင်ကမကြာမီပြသတော့မယ့် တတိယဆုံမှတ်ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲက ထိုင်းနိုင်ငံကဒါရိုက်တာနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကဒါရိုက်တာတို့ ပူးပေါင်းရိုက်ကူးထားတဲ့ အက်ရှင်ဇာတ်ကားပါ။ အက်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်မှာပါလို့ဆိုတဲ့ ပြေဇင်က . . .
“အဲဒီဇာတ်ကားကကျန်ခဲ့တဲ့နှစ် ဒီအချိန်ကရိုက်တာ။ ကျွန်တော်တို့ တော်တော်ပင်ပင်ပန်းပန်းရိုက်ထားပါတယ်။ ယိုးဒယားကဒါရိုက်တာတွေရယ်၊ မြန်မာဘက်က BEC က ဒါရိုက်တာတွေရယ် ပူးပေါင်းပြီးတော့ ရိုက်ထားတာပါ။ အက်ရှင်ဒရာမာ ဇာတ်ကားလည်း ဖြစ်တယ်။ အက်ရှင်တွေကို တော်တော်ကြိုးစားပြီး သရုပ်ဆောင်ထားကြတယ်။ ကျွန်တော် ဒီဇာတ်ကားမှာ အများကြီးတော့မပါပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ တချို့အပိုင်းတွေမှာကိုမင်းဦးရဲ့ တပည့်ဆိုတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အက်ရှင်ထိုးရတာတွေပါတယ်။ ကားတွေ၊ ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့လည်း အက်ရှင်ခန်းတွေပါတော့ ကြိုးစားပြီးတော့ ရိုက်ထားပါတယ်။ အက်ရှင်တစ်ခန်းတစ်ခန်းဆိုရင် ၃ရက်၊ ၄ရက် အချိန်ပေး တည်ပြီးရိုက်ထားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားမှုအပိုင်းကတော့ အပြည့်ပါပဲ။ သူတို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်း ကျွန်တော်ပါဝင်ရမယ့် အခန်းအတိုင်း ကြိုးစားပြီး သရုပ် ဆောင်ထားပါတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။ ကျရာဇာတ်ရုပ်ကိုပီ ပြင်စွာ သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ပြေဇင်အနေနဲ့ အခုနောက်ပိုင်း မှာဗီလိန်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်တာများနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လည်းသူ့ကို ပေးလာတဲ့နေရာကို ကြိုးစားရိုက်ကူးမှာပါပဲဆိုတဲ့ ပြေဇင်က . . .
“ကျွန်တော်လုပ်ရမယ့် တာဝန်၊ ကျွန်တော်ရဲ့နေရာမှာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင်ပဲ ကြိုးစားတယ်။ ဒါပေမဲ့ တချို့နေရာတွေ ကျွန်တော်နဲ့ မလိုက်ဖက်တာ တွေရှိတယ်။ အဲဒီလိုနေရာတွေဆိုရင် အံဝင် ခွင်ကျဖြစ်မှုမရှိဘဲလွဲသွားတာတွေရှိတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင် ဗီလိန်အဖြစ် ကမ်းလှမ်း ကြတာများတယ်။ ဗီလိန် များတော့ လည်းလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင် ရတာကို ၀ါသနာ လည်းပါတယ်။ လုပ်လည်းလုပ် ချင်တဲ့အတွက် ကျွန်တော့်ကို သရုပ်ဆောင်တဲ့နေရာ၊ ဘယ်နေရာကိုမဆိုသရုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် အဆင်သင့်ပြင်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော့်မှာ ကြောက်တဲ့စိတ် တော့မရှိဘူး။ ကြောက်တဲ့စိတ် မရှိတာက ကျွန်တော့်ကို မြင်တာ ရှင်းရင်ရှင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်သ ရုပ်ဆောင်လုပ်တယ်။ ဗီလိန်ဆို လည်းဗီလိန်ပေါ့။ ဆရာဝန်လုပ်ရလည်း ဆရာဝန်၊ ကျောင်းဆရာလုပ်ရလည်း ကျောင်း ဆရာပေါ့။ ပရိသတ်တွေ ကနောက် ပိုင်းလည်းသိလာပါပြီ။ ပရိသတ်တွေ မုန်း မှာတွေ၊ အမြင်ကပ်မှာတွေ ကျွန်တော် မကြောက်ဘူး”လို့ ပြောပါတယ်။